ကမ္ဘာ့ဒေသအချို့၌ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာခြင်းသည်လူ ဦး ရေအတွက်အစားအစာရရှိရန်အခြေခံလုပ်ဆောင်သည့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကိုထိခိုက်စေသည်။ ဒါကိုအိန္ဒိယမှာသူတို့သိတယ်။
လယ်သမားတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတာတွေစတင်ခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့“ မိုးမရှိဘူး” လို့ Rani ရဲ့ဇနီးကပိုးသတ်ဆေးကိုစားပြီးနောက်သေဆုံးသွားတာပါ။ အဆိုးဝါးဆုံးကတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ အမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ (PNAS) ၏ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရလာမည့်နှစ်များတွင်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်မိုးခေါင်ခြင်းများပိုမိုပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှတိုင်းပြည်သည်အလားတူအဖြစ်ဆိုးများပိုမိုကြုံတွေ့ရတော့မည်ဖြစ်သည်။
အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များ, ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရေလိုအပ်တယ်။ ၎င်းသည်ဘဝ၏အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးရှားပါးသောအခါ၊ ပwhenိပက္ခများဖြစ်ပွားသောအခါဖြစ်သည်။ လူသားမဟုတ်သောတိရိစ္ဆာန်များသည်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆင်တူသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ကြီးမားပြီးအားကောင်းလျှင်ဆင်များကဲ့သို့ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ရေအိုင်ငယ်လေးကိုယူပြီးမည်သူ့ကိုမျှအနီးကပ်မသွားစေခြင်း၊ ပြီးတော့သူတို့ကသေးသေးလေးဆိုရင်နည်းနည်းတောင်မှမသောက်နိုင်တော့ဘူး။
လူတွေကရေမရှိတဲ့အခါမှာ၊ ငါတို့ကိုရေမ ၀ င်အောင်တားဆီးတဲ့သူတွေကိုညှိနှိုင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆင်နွှဲနိုင်တယ်။ တကယ်တော့အဲဒီသူတွေကိုရှိပါတယ် အန်စာ တတိယကမ္ဘာစစ်ဟာရေနံအတွက်မဟုတ်၊ နယ်မြေအတွက်သာမကရေအတွက်ပါ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံလူတို့သည် ပို၍ ပင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နိုင်သည်.
အိန္ဒိယမှာ, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်အလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ကျော် (၁.၃ ဘီလီယံ) ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်လယ်သမားများသည်တိုင်းပြည်၏စိတ်နှလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အနှစ် ၃၀ အတွင်းစီးပွားရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အိန္ဒိယ၏စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုရာမှယခုအခါ ၁၅% မျှသာရှိသည်။ ထိုပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၂.၂၆ ဘီလီယံဖြစ်သည်။
လယ်သမားများသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ရိတ်သိမ်းအထွက်နှုန်းညံ့ဖျင်းခြင်း၊ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အစိုးရမှကျန်ရှိနေသေးသောမိသားစုဝင်များအတွက်ငွေကြေးအာမခံပါသည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုအတွက်မကောင်းသောမက်လုံးဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် 2050 အတွက်, ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » အိန္ဒိယတွင်လယ်သမားများသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြသည်
ရာစုအကုန်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်